लाइट चीजकेक - थर्मोमिक्स रेसिपीहरू ThermoRecines
मिठाई300 मिनेट8 व्यक्ति
मैले यस डेजर्टलाई हप्ताको केही दिन पहिले एकका लागि बनाएँ आकस्मिक खाना घरमा मेरा बाबुआमाको साथ। मेरी आमाको पहाडमा काम थियो र मलाई यो भयो कि उनीहरूलाई खाजा पछि निम्त्याउन र त्यसपछि नातिनाहरूसँग एक दिउँसो मजा लिन।
मैले पकाउन चाहेको खानाको बारेमा मलाई पहिले नै अलिकति थाहा थियो, किनकि मैले मेरो बुबाको टिप्पणी लामो समयदेखि सुनेको थिएँ कि उहाँ चाहानुहुन्छ। मुर्सियन कल्ड्रन, म मिठाईको बारेमा सोच्न थाले। अचानक, मलाई यो नुस्खा याद आयो र यो आदर्श देखिन्थ्यो हल्का र अधिक भरिने छैन।
यो चीजकेक दही मा भेरोमा कन्टेनर डिस्पोजेबल एल्युमिनियम पन्नी मोल्डहरू प्रयोग गरेर, यो फ्ल्यान हो। यसलाई राम्रोसँग छोप्नु र माथि पर्याप्त किचन पेपर वा कपडा राख्नु महत्त्वपूर्ण छ ताकि यसले नमीलाई अवशोषित गर्छ र राम्रोसँग दही गर्न सक्छ। यदि समयको अन्त्यमा तपाईंले देख्नुहुन्छ कि यो अझै पनि केन्द्रमा दही भएको छैन, लगभग5मिनेट राख्नुहोस् र यो उत्तम हुनेछ।
जब यो अनमोल्ड गर्ने समय आयो, मलाई Baileys® को छोपेर दूधमा भिजाइएको कुकीहरूको आधार माथि राख्नु भयो। त्यसपछि मैले यसलाई ट्रेमा राखेर उल्टाएर माथि राखें स्ट्रबेरी जाम र पुदिना सहित एक ब्ल्याकबेरी।
तपाईं बिना यो संस्करण गर्न सक्नुहुन्छ प्रकाश, हामीले केवल सामान्य व्यक्तिहरू र १० ग्राम चिनीको लागि १० ग्राम पाउडर मिठाईको साथ स्किम सामग्री बदल्नु पर्छ।
चीजकेक प्रेमीहरूले पक्कै पनि यो माया गर्नेछन्। यो धेरै धनी बाहिर आउँछ, यो हल्का छ र सबै cloying छैन। अरु के छ त राम्रो धेरै राम्रो लाग्छ। यो प्रयास गर्नुहोस् र तपाईं मलाई भन्नुहुनेछ
1 हल्का चीसकेक
एक आरामदायक खाना समाप्त गर्न एक हल्का मिठाई
तयारी समय: 4H
कुल समय: 5H
300 ग्राम हल्का क्रीम चीज (Philadelphia® प्रकार)
Im०० ग्राम स्किम्ड दुध
G g पाउडर मिठाई
१ प्राकृतिक स्किम्ड दही
प्यानलाई ग्रीस गर्न 1 चम्मच (डेजर्ट साइज) बटर
२०० ग्राम हल्का स्ट्रबेरी जाम
हामीले पनीर, दूध, अण्डाहरू, मिठाई र दहीलाई सिसामा राख्यौं र मिक्यौं Seconds० सेकेन्ड, गति 30।
मिश्रणलाई मोल्डमा हाल्नुहोस् (पहिले मक्खनले ग्रीस गरिएको थियो), यसलाई यसको ढक्कनले राम्रोसँग छोप्नुहोस्, माथि किचन पेपर वा कपडा राख्नुहोस् र भारोमा कन्टेनर भित्र राख्नुहोस्।
हामी कभर र रिजर्भ गर्छौं।
हामीले पानीलाई गिलासमा राख्यौं, भेरोमा कन्टेनर यसको स्थिति र कार्यक्रममा राख्छौं Minutes मिनेट, भेरोमा तापमान, गति २।
समयको अन्त्यमा, हामी सुनिश्चित गर्छौं कि यो राम्रोसँग सेट गरिएको छ र यसलाई चिसो हुन अनुमति दिई वारोमाबाट मोल्ड हटाउनुहोस्।
हामी फ्रिजमा लगभग3वा4घण्टा राख्छौं ताकि यो धेरै चिसो हुन्छ।
सेवाको समयमा, हामी ट्रेमा मोल्डलाई उल्टाउँदै चीजरकेक अनमोल गर्दछौं र माथि जामसँग सजाउँछौं।
थप जानकारी - मर्सियन काउल्ड्रोन
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: सजिलो, Postres, वरोमा रेसिपीहरू
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » Postres » हल्का चीसकेक
यो स्वादिष्ट देखिन्छ, मलाई चीज़केक्स मनपर्दछ, यस नुस्खाको लागि धन्यवाद :))
ठीक छ, ठीक यस शनिबार हामी साथीहरूको रूपमा भेला हुन्छौं, र हामी एउटा कल्ड्रोन तयार गर्न जाँदैछौं; के म देख्छु बाट यो मिठाई हामीमा आउँदैछ जुन न त रंग्यो। साझा गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यबाद।
Mariló लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते! यसलाई भेरोमामा राख्नुको सट्टामा चुल्हामा घुमाउन सकिन्छ? यस अवस्थामा, यसलाई बेन-मारीमा राख्नु आवश्यक पर्दछ कि यदि यो फ्लान हो? र कति लामो मुरी मुरी धन्यवाद!
CosmicGirl लाई जवाफ दिनुहोस्
हो, तपाईं यसलाई भट्टीमा घुमाउन सक्नुहुन्छ, तर यो बेन-मारीमा हुनुपर्दछ, तपाईंले भन्नुभयो, फ्ल्यान जत्तिकै। म तपाईंलाई सटीक समय दिन सक्दिन किनकि यो तपाईले प्रयोग गर्ने मोल्ड र ओभनको प्रकारमा निर्भर हुन्छ। तर एक दिशानिर्देशको रूपमा, फोटोमा जस्तो मोल्डको लागि, म न्यूनतम -०-30 मिनेट लाग्छ। यसलाई सहि बनावटमा हेर्नुहोस् र यो अत्यधिक नरम छैन भनेर समय-समयमा यो पोकिंग गर्नुहोस्। भाग्यमानी!
नमस्ते सिल्भिया, म यो बनाउनको लागि यो नुस्खा लेख्दै छु, तर मलाई थाहा छैन के म गलत गर्दैछु कि मैले भर्खरै यस्तै प्रकारको बनाएँ र मैले यसलाई लामो समयको लागि छोडिदिए जुन तपाईंले मलाई भन्नुभएको छ र यसले कर्ललिंग समाप्त गर्दैन। , मैले के गर्नुपर्छ?
म तपाईंको उत्तरको लागि कुर्दै छु, त्यहाँ भएकोमा धेरै धेरै xicas धन्यबाद।
VERONICA लाई जवाफ दिनुहोस्
यो धेरै राम्रो देखिन्छ, यस सातामा म गर्छु।
तपाईले हामीलाई पठाउनु भएको लाइनका लागि धन्यबाद।
नमस्ते .. यो राम्रो देखिन्छ .. भोली म यो गर्नेछु ... मलाई के थाहा छ के तपाईं मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ कि छ .. तपाईं यहाँ पाउडर मिठाई राख्नु छ र म मात्र spartan पाउडर पाउन र यो खाना पकाउन उपयोगी छैन, त्यसैले। म सहयोगको लागि सोध्छु, अब म सुक्रोज वा फ्रुक्टोज प्रयोग गर्न सक्दिन ……। यदि तपाईंलाई थाहा छ म कहाँ पाउन सक्दछु र स्वीटनरको ब्रान्ड। धन्यवाद
नमस्कार आना, पहिला तपाईंलाई भन्नुहोस् कि यो विषय मेरो लागि एकदम नयाँ हो, मलाई थाहा छैन मैले तपाईंलाई कहिले पढें, यो मलाई भयो कि तपाईंले तिनीहरूलाई प्याराफर्मेसीमा फेला पार्न सक्नुहुनेछ।
यो धेरै राम्रो देखिन्छ, तर मसँग एउटा प्रश्न छ, के म यसलाई सिलिकॉन मोल्डमा गर्न सक्दछु वा यो एउटा डिसेप्टेबल डिभ्सेजेबलमा हुनुपर्दछ? म भोली यो गर्न चाहन्छु र मसँग त्यस्ता प्रकारका मोल्डहरू बाहेक सबै सामग्रीहरू छन्! Hehe तपाईंको नुस्खा को लागी धन्यवाद।
मार्केलाई जवाफ दिनुहोस्
यो मन पर्यो! र यसको माथि प्रकाश ... म निश्चित रूपमा यो गर्छु!
अद्भुत व्यंजनहरु को लागी धन्यवाद!
नमस्ते! मैले भर्खरै यो गरें, यो min० मिनेटको साथ राम्रोसँग घुमाएको जस्तो देखिन्छ, मैले एल्बल पेपरको ढक्कन राम्रोसँग बन्द गरेको छु र त्यसपछि मैले दुईवटा भान्छा कागजहरू माथि राखेको छु। आज दिउँसो राती म भित्र आउँछु र तपाईंलाई भन्छु यो कसरी भयो ... तर यो उत्कृष्ट देखिन्छ!
नुस्खा को लागी धन्यवाद
त्यो, त्यो क्रिस्टिना ... हामीलाई बताउनुहोस् यो कसरी भयो!
ढिलाइ माफ गर्नुहोस् ... यो बुनेसिमअआआआआआआ था !! उत्कृष्ट नुस्खा वास्तवमा, एक सफलता।
क्रिसमसको लागि भुटेको चिभ्स